Paris Ejiji Week 2015
Oge agba ọsọ ọsọ ọsọ nke 2015 emechaalarịrị, ndị na-emepụta ihe ndị kasị dị ịrịba ama gosipụtara nchịkọta ha na oge opupu ihe ubi-oge okpomọkụ. N'ezie, na-enweghị ụdị ọhụrụ, agba, silhouettes adịghị eme. Ọ bụ mkpebi ndị a na-emepụta n'oge na-adịghị anya nke na-agbasa ngwa ngwa nke ahịa ahịa, nke pụtara na ọ bụ oge iji chegharịa uwe mwụda ahụ, na-edeghachi ya na ederede akwụkwọ. Ọtụtụ ụlọ ejiji na-ewepụta nchịkọta ha na ihe nkiri ngosi na Paris na 2015, ma Valentino, Louis Vuitton , Chanel, Alexander McQueen , Givenchy nwetara nkatọ kachasị njọ.
Collection Valentino . Oge nke nyochawa ụwa na kọmputa, dị ka ndị na-emepụta ejiji na ụlọ ụlọ a, nabatara mmadụ. Ndị nrọ na ezigbo ndị romantị ga-enwe mmetụta dị oke. Ọ bụ n'ihi na ha na ụlọ Valentino kere oke nchịkọta nke uwe mmiri-okpomọkụ, nke na-amaba na akwa ụrọ, English embroidery na pastel romantic shades. Na-enweghị nkwalite ịlụ nwanyị!
Chanel gbakọtara . Ruo ọtụtụ iri afọ, Haute Couture na Paris setịpụrụ site na ndị na-emepụta Chanel, na 2015 ewepụghị. N'agbanyeghị na Karl Lagerfeld, bụ onye na-achị ìgwè ndị na-emepụta ụlọ a, na-anwale otu tweed. Ọ ga-adị ka nkọwa nke ihe a adịbeghị anya ọhụụ, mana mpempe monochrome nke Lagerfeld ji mee ihe na 2015 dị ịtụnanya! Ma eleghị anya, na Chanel na Chanel, ọ na-emepụta nchịkọta kachasị ike na nke bara uru n'akụkọ ihe mere eme nke ịdị adị ya.
Louis Vuitton Collection . Otutu nke agba ocha, akpụkpọ anụ, ihe odide Scandinavian na silhouettes - ya mere ị nwere ike ịkọwa oge nchịkọta ụda mmiri nke Louis vuitton. Egwuregwu eji eme ihe na Paris na 2015 mere na ọnọdụ kwesịrị ekwesị - ogige snow na-acha ọcha, oké osimiri nke na-egbuke egbuke. O doro anya na ndị na-emepụta chọrọ ka oge dị jụụ na-egbuke egbuke.
Gbasara Givenchy . Ụlọ ejiji Givenchy agba palette, njirimara maka oge mgbụsị akwụkwọ-n'oge oyi, fọdụrụ agbanweghi agbanwe. Otú ọ dị, na nkọwa ọhụrụ ahụ, agba ojii, agba aja na agba ntụ na-ele anya na mbụ. A rụpụtara nke a, n'ihi obere mpempe akwụkwọ na ihe ndị na-adọrọ mmasị. Uwe eji ejiji ogologo, uwe mgbochi na akwa obosara, ihe omimi nke "unere", natara ndu ohuru.
Collection Alexander McQueen gbasara . Onye na-eme ihe n'echeghị ihe ọ na-eme anaghị ahapụ ụkpụrụ ya, ana m atụ aro na ụmụ agbọghọ na-eyi uwe na-awụ akpata oyi n'ahụ nke na-agaghị ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị. Ihe ndị dị mma, feathers, fringe, multilayered, florinces and ruches - Alexander McQueen collection ga-eju ndị inyom kachasị mma nke ejiji!
Mkpokọta Stella McCartney . Stella McCartney nọgidere na-anwale ụdị ụdị monochrome. Ụdị nke onye mmepụta nkà nwere dị iche iche dị iche iche dị iche iche site n'iji ya eme ihe na ịdị mma. Nchọpụta nke ọma, ihe doro anya, obere ihe ịchọ mma na-eme ka ị nwee "akpụkpọ anụ abụọ", nke ị na-achọghị ịgba.
Chloé Chloé . Maka ndị na-emepụta ụlọ ejiji Chloé, oge oyi anaghị abụ ihe ngọpụ iji hapụ uwe elu. Nchịkọta ohuru ahụ, nke e gosipụtara na Paris Fashion Week, na-eji akwa akwa na uwe silk, ogologo ikuku uwe elu. Ebumnuche nke nchịkọta ahụ bụ ịhụnanya ịhụnanya, nhazi, ịdị ọcha.
Azụ ụmụ nwanyị - oyi 2016-2017
Mgbakwunye Nail - ihe ọhụrụ 2014
Nwepụta ntu ọnụ
Nkpa ndị ọzọ 2013
Uwe isi ntutu na ntutu isi
Uwe akwa na akwa ukwu 2014
Yudashkin - Mmiri-N'oge okpomọkụ 2015
Swimwear Milavitsa 2017 - ọhụrụ nchịkọta ama ama
Ugboro ejiji 2013
Akpụkpọ ụkwụ kachasị ejiji akpụkpọ ụkwụ 2014
Chroches n'ime ngụgụ
Ọgwụgwọ na garlic
Ntak emi orchids wilt buds?
Cutlets ke aerogril
Ulo-elu maka ndi okenye
Kedu uru mmanya ihe ọṅụṅụ oroma bara?
Irina Sheik ghọrọ ihu nke Missoni ma wepụta foto mbụ na netwọk ahụ site na nnọkọ foto
Selena Gomez na nne ya na-ese okwu ọ bụghị n'ihi Bieber
Chloe Moret na Alex Rowe gbara ya na ya
Egwuregwu asọmpi maka ụlọ ọrụ ọchị
Kedu otu esi ahọrọ ákwà mgbochi maka ime ụlọ ahụ?
Microsporia na nkịta
Adele na ezinụlọ ya nwere ụbọchị mara mma na ogige ntụrụndụ
Nyochaa usoro: usoro "na 60"
Lemon achịcha bụ ihe na-atọ ụtọ na-emeso ihe na-enye ume ọhụrụ!
Nyocha n'oge ime
Lagman si beef - Ezi ntụziaka maka nri na-atọ ụtọ nke Uzbek